China Soft PVC USB ifektri abakhiqizi | SJJ
Esikhathini samanje, wonke umuntu okungenani une-USB eyodwa noma ngaphezulu yokonga imininingwane noma yokudlulisa inani ledatha amakhompyutha ahlukile.
Esikhathini Sesimanje, wonke umuntu une-USB eyodwa noma ngaphezulu yokonga imininingwane noma ukudlulisa inani ledatha lamakhompyutha ahlukile. I-I-PVC ye-PVC ethambile ingavikela i- Umshayeli we-USBkahle kakhulu ngekhava layo le-PVC elithambile futhi elizinzile. Asikho isidingo sokukhathazeka nge-Umshayeli we-USBwephuke lapho wehla. Isembozo esithambile se-PVC singenziwa sibe bobunjwa abahlukahlukene abathandekayo noma inhlanganisela yembala ehlukile. Amalogo agcwele e-3D enza imiklamo igcwale futhi icebe. Lokhu kuyicacisa ngokuphelele imibono yomklami nemiphefumulo ejulile. Okunamathiselwe okuhlukile njengezindandatho zokhiye, izintambo, okhiye bama-key, amaketanga ebhola ngaphandle komshayeli we-USB enza imisebenzi eminingi yeumshayeli we-PVC othambiles. Lapho usebenzisa i-softI-PVC USB, ujabulela isikhathi esimnandi sempilo ngezinto ezikhethekile.
Ikholomu ye- umshayeli we-PVC othambilekusuka ku-2 GB kuye ku-256 GB, ihlangabezana nezidingo zakho ezahlukahlukene ngezimfuno ezincane noma ezinkulu zekholomu. Izintengo ziyaxoxisana ngokuya ngezidingo zakho ezinemininingwane.
Izinto zokwakha: Umshayeli weSoft PVC + USB
Ama-Motifs: Die Struck, 2D noma i-3D, izinhlangothi eziphindwe kabili
Imibala: Ingafanisa imibala ye-PMS
Ukupakisha: Ukupakisha kwe-Blister, noma landela imiyalo yakho.
Langaphambilini Izindondo ze-Acrylic ezenziwe ngo-Metal
I-USB Flash Drives yangokwezifiso
Umshayeli we-PVC USB
umshayeli we-PVC othambile
Ama-coasters we-USB afudumele